musha Africa Singers Davido Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeMuNigerian Celebrity anozivikanwa zvakanyanya nezita remadunhurirwa "OBO".
Yedu vhezheni yeDavido's Biography, kusanganisira Nyaya yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva pamazuva ake ehujaya kusvika panguva yaakawana mukurumbira.
Ongororo yeBio yaDavido inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya. Zvikuru, vasikana vaDavido, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye chimwe chezviito zvikuru muindasitiri yemimhanzi yeNigerian / Africa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Davido's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Davido Upenyu Hwepamberi uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga kubva, Davido Adedeji Adeleke akaberekwa musi we 21st waNovember 1992 muAtlanta, Georgia USA
Davido akaberekwa kuna amai vake, Veronica Adeleke (mudzidzisi) uye kuna baba vake, Adedeji Adeleke (mukuru webhizinesi).
Nyika yeNigerian / American yenyika yeYoruba dzinza neWest Africa midzi yakakurira muLagos state Nigeria kwaakakurira pamwe nehanzvadzi dzake - Sharon, naAshley Coco pamwe nehama Adewale.
Kukura muLagos, Mudiki Davido aive akadyiwa ane hasha mwana ane vabereki vaitamba kuenda kune zvaaida.
Pakati pekusanzwisisika kwekusvika uye pesvedzero yehupfumi hwemhuri yake, Davido akatanga kuda mimhanzi uye aive anofarira vanamuimbi veNigerian panguva iyoyo saLagbaja.
Davido Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Mukurumbira wekuNigeria akatanga dzidzo yake yepuraimari kana yepuraimari muNigeria asi akaipedza kuAtlanta muGeorgia, USA.
Mushure meizvozvo, mhuri yake yakadzokera kuNigeria uko akanyoresa kuBritish International Chikoro muLagos Nigeria kune yake yechipiri kana sekondari dzidzo.
Ndichiri kudzidza pachikoro, Davido aive nechido chakasimba chemimhanzi asi akaita zvakawanda kuviga 'yake mimhanzi parutivi' nekuda kwekutenda kwemhuri yake kuti aizoita baba vake bhizinesi empire mushure mekuwana akakosha ezvidzidzo.
Nekudaro, Davido akachengeta yakaderera kiyi mimhanzi persona kudzamara apedza chikoro chesekondari ndokuenderera mberi nekudzidza Bhizinesi Rekuita paOakwood University kuUS.
Davido Yekutanga Basa Rehupenyu:
Oakwood University yaive nyika nyowani yakashinga kuna Davido uyo akaenda kumimhanzi achangogadzikana kuenda kuchikoro.
Achienderera mberi nezvaaifarira mumutsara iwoyo, Davido akatenga michina yemimhanzi uye akatanga kugadzira marimba semugadziri.
Mumhanzi kukurumidza kusiya muOakwood University paakatanga kuwana mamakisi akashata ndokutamira kuLondon kwaanopedza mwedzi achichinja kubva pakuva anogadzira iye achigadzira hunyanzvi hwekuimba.
Davido Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
2011 raive gore iro Davido paakadzokera kuLagos, Nigeria aine ma tattoos nokubaya. Baba vake avo vakambomuzivisa kuti ashaika vakakurumidza kusvika nemapurisa kuti abate muimbi webhuroka, timu yake yekugadzira uye musikana weEx-musikana.
Mushure mekunge mhirizhonga yadzikira, Davido akasvika pachibvumirano nababa vake kukudza zita remhuri nekushandira kupedza kudzidza kubva kune yakazvimirira tertiary institution - Babcock University - iyo yakabhadharwa nababa vake kuvaka dhipatimendi remimhanzi kekutangisa kirasi yeimwe.
Davido Biography - Simuka Kune Mukurumbira Nyaya:
David anga achiri mudzidzi weBabcock University paakaburitsa dambarefu rake, "Omo Baba Olowo", mu2012.
Iyo albam iyo yakange yakarova singles senge "Dami Duro" yakahwina Best R & B / Pop dambarefu pamwe nekugashira kusarudzwa kwealbum yegore kuThe Headies muna 2013 uye 2013 Nigeria Entertainment Awards.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Davido chiito chinotungamira muindasitiri yemimhanzi yeAfrica neyeNigerian aine rake razvino dambarefu riri "Blow My Mind" Chris Brown) yakaburitswa muna Chikunguru 2019. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Iye mukurumbira wekuNigeria haasati aroora panguva yekunyora. Isu tinounza chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye ikozvino hukama hukama.
Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana mugadziri akabatanidzwa kune vashoma pane vakadzi vatanhatu kubva paakasimuka kuva nemukurumbira.
Ivo vanosanganisira yeGuinea modhi Sira Kante, Ghanian Runako, Nish Kards uye Kenyan Vixen Staicey Brianar Brown.
Nekudaro, anochengetedza hukama hwepedyo nevakadzi vaviri vaaimbove musikana wake, Sophie Momodu naAmanda nekuda kwekuti hukama hwavo navo hwakasimudza kuberekwa kwevanasikana vake vaviri. Imade (akaberekwa May 2015) uye Hailey zvichiteerana.
Nezve hukama hwake panguva yekunyora, Davido ari kufambidzana nemusikana wake Chioma Rowland.
Senge panguva yandakanyora iyi Bio, Chioma aive 300 mwero mudzidzi wezvehupfumi paBabcock University apo hukama hwevaviri hwakava nyaya yehurukuro yeruzhinji mu2018.
Shiri dzerudo dzakasangana pamberi pe2017 dzinogovana rudo rwakadzama uye rwekudyidzana kuti hukama hwavo hwakafemera rwiyo rwemuimbi "Assurance" mu2018.
Kunyangwe Fans isingamirire kuti vaone zvinoitika pahukama hwavo, mikana irikuenderana naDavido kutora zvinhu naChioma padanho rinotevera.
Davido Hupenyu hwemhuri:
David anobva kumhuri yakapfuma. Tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaDavido:
Adedeji Adeleke ndibaba vaDavido. Iye akazvarwa pazuva rechitanhatu raKurume 6 uye anga ari bhizimusi magnate uye muzvinashawo kubva pahupenyu hwamuimbi kusvika nhasi.
Zvakakodzera kutaurwa nezve zvakaitwa naAdedeji mubhizinesi renyika zvinosanganisira kutungamira mukuvakwa nekuwedzeredzwa kweBanana Island muLagos uye kukwezva vatengesi pasi rese kukwezvwa kwave kufarirwa nevashanyi vakapfuma.
Kure kubva kubhizinesi, Iyo CEO ye "Pacific Holdings Ltd" ine ruzivo rwakakura kwazvo mune zvedzidzo uye yakabatsira kuwana iyo Adeleke University muEde, Osun State Nigeria.
Pamusoro pazvose, anogovera hukama hwepedyo naDavido uyo waakashongedza kuve ane hushamwari uye anoshanda nesimba.
Nezve amai vaDavido:
Veronica Imade Adeleke aive amai vaDavido. Akashanda semudzidzisi panguva yehudiki yaDavido uye aizivikanwa zvakanyanya semunhu ane rupo aine moyo mukuru kusvika parufu rwake muna 2003.
Asati afa, Veronica aifarira zvemimhanzi uye aive nebhendi raakatumidza zita remuimbi - "Divi raDavid".
Zvinoita pasina kutaura kuti muimbi aive padyo kwazvo naamai vake sezvo achimusimudzira nekupa mazita evanasikana vake - Aurora Ndakagadzira naHailey Veronica Adeleke - mushure make.
Nezve hama dzaDavido:
Davido ane vanin'ina vatatu. Ivo vanosanganisira mukoma wake mukuru Adewale pamwe nasisi Sharon & Ashley Coco.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvehama dzemurume kunze kwekuti vese vane zvigaro muBhodi revatungamiriri vekambani yababa vavo, Pacific Holdings.
Uye zvakare, ivo vanogovana chisungo chepedyo nemumwe uye vanorarama hupenyu hukuru.
Kure kubva kumhuri yepedyo yaDavido zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake nasekuru nasekuru nasekuru.
Davido babamunini Isiaka (ava kunonoka) uye Ademola Adeleke vakawana nzvimbo dzakakwirira mune zvematongerwo enyika nepo zvishoma zvichinyatso kuzivikanwa nezve amaiguru, babamunini uye vazukuru.
Muimbi uyu zvakare ane hama dzinozivikanwa saB-tsvuku naShina Rambo vese vari vaimbi.
Davido Hupenyu Hwako:
Chii chinoita kuti Davido abike ... Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Davido's Persona musanganiswa weScorpio Zodiac maitiro.
Iye ari wepakutanga, anoshanda, anofarira uye akavhurika kuratidza zvinhu nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutamba, kufamba, kuona mafirimu uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari nehama.
Davido ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora 19 miriyoni panguva yekunyora.
Kwakatangira hupfumi hwomuimbi kwakanyanya kunobva mukuyedza kwake kwemimhanzi uye endorsement inobata nemhando dzakadai seInfinix, zvinonhuwira zveAX uye Travelbeta apo ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zvaDavido, ane imba diki diki inozivikanwa muAtlanta kwaanoshandisa zororo rake pamwe neimba inodhura muLekki kuLagos state yakamubhadharira anopfuura N25,000,000 mumari yekuvaka.
Mutengo wemuimbi unomubvumidza kuti ataure kuravira kwake kwakasarudzika mumota dzekunze pakati padzo dzinosanganisira Audi R8 Coupe, Yero Chevrolet Camaro GS, Range Rover Sport uye Rolls Royce Phantom.
Davido Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Davido Childhood Story uye biography pano zvinhu zvishoma-zvisingazivikanwe kana zvisinga tsanangurike chokwadi chakasanganisika mune yake bio.
Davido anoshingairira kupa rubatsiro kunyanya kubhadhara mari dzechikoro dzevanotambura vadzidzi uye kupa zvipo kune vanorwara uyezve kune vechidiki vane tarenda.
Iye haana mashoma pane 9 maTattoo panguva yekunyora. Vakakurumbira pakati pehunyanzvi hwemuviri ndevaya vari pamaoko ake.
Ivo vanosanganisira Musical manotsi, chirevo "Anotapira Amai", zita remwanasikana wake wekutanga Imade uye chiLatin mutsara, "Veni Vidi Vici" (Ndakauya, ndakaona, ndakakunda). Iye zvakare ane nyeredzi nyora pamutsipa wake uye izwi rekuti "Tenda" rakatemwa pazasi pechiratidzo chenyeredzi.
Nezve chitendero chake, Davido akazvarwa uye akarerwa seSeventh Day Adventist. Iye anozvizivisa nekereke panguva yekunyora uye haana kuona mavara achinamata neboka rakasiyana.
Muimbi uyo ane anoverengeka Instagram mavhidhiyo akamubata achisvuta anoda kunwa uye anofarira lager doro kune mamwe marudzi ezvinwiwa zvakaoma.
Thanks for reading vedu Davido Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography yevanozivikanwa vemuAfrica.